ANCYL inikeze abafundi imifundaze | News24
ANCYL inikeze abafundi imifundaze
Isithombe: precious gumede Abafundi abathole imfundaze bejabulile emahhovisi kaANC ePort Shepstone.
INHLANGANO yentsha kaKhongolose iANC Youth League (ANCYL) yasoGwini inikeze abafundi abayishumi nanye imifundaze yokuqhuba izifundo zabo emanyuvesi. Usihlalo weANCYL uMfanafuthi Ngwabe uthe labafundi bathole lemifundaze ngenxa yokuzimisela kwabo esikoleni bathola imiphumela emihle kumatikuletsheni.
UNgwabe uthe njengenhlangano kubona kubalulekile ukuthi baxhase ezemfundo.
“KuKhongolose siyibeka phambili imfundo njengoba nje sinikezele lemfundaze sikhombisa ukuthi isifiso sabafundi semfundo yamahhala singabayimpumelelo, ngoba imfundo iyilungelo,” kusho Ungwabe.
Uyale abafundi wathi njengoba bethole lemfundaze akusho ukuthi bangcono kunabanye.
“Baningi abafundi abaphasile kepha nina nibe nehlanhla yokuba nithole lemifundaze, ngalokho ngisho ukuthi nilisebenzise kahle nangokuzimisela lelithuba. Nifike ezikoleni nikhumbule ukuthi niphumaphi futhi niyaphi. Siyazi ukuthi kwenzekalani emanyuvesi umuntu abone ukuthi akaqale impilo engafanelekile, nathi siphuma khona. Uma uzimisela ubuya nemiphumela emihle, ukwazi nokuthi uzothuthukisa umphakathi wangakini,” kusho usihlalo.
Imfundaze izokhokhela izindawo zokuhlala zabafundi, ukudla kanye nezincwadi nemali yonke yonyaka yesikole.
Imali yelemifundazwe ibalelwa ku R37 000 kuya kuR50 000 umfundi ngamunye kodwa kuya ngokuthi umfundi uyofundaphi nanokuthi imali azoyidinga ingakanani.
Omunye wabafundi abathole lomfundaze uNondumiso Sibeko uthe ujabule kakhulu ukuba ngomunye wabakethiwe, futhi uthanda ukubonga iqembu elibusayo ngokuzikhathaza ngabafundi.
“Ngizizwa ngijabulile,ngithnda ukubonga kakhulu kwi ANC Youth League yakwi-district yethu ngalokhu esenzele khona,” kusho uNondumiso.